Ukwahlulwa ipropati, eyaziwa njenge kwebhodi unikezelo, ngu-matyala ukwahlulwa ipropati amalungelo nezibophelelo zethu phakathi amaqabane ngexesha wokuqhawula umtshato.
Unikezelo impahla ngu ulwahlulo, ngenxa ukufa okanye ukuchithwa kwezindlu a umtshato, impahla esibizwa umnini mntu ubhubhileyo, okanye acquired ngexesha ikhosi ye-mtshato. Engilane Wales, amahlakani okanye ngaphandle emtshatweni ingaba uyavuma indlela edibeneyo kwaye severally bamba impahla iya kuba umahlule ngaphandle la manyathelo okungenelela kweenkundla. Apho isivumelwano azinako ufikelele, iinkundla inakho ukucelwa ukugqiba enobulungisa kwaye kwebhodi uphinda-phindo. Unobumba Miller v Miller wanika umfazi a considerable indawo ekuyo into le umyeni ke nje uzuza ezibangela ukuba ukususela dealings Kwisixeko nkqu nokuba umtshato wenziwa elifutshane waphila. Kwimeko apho i-wokuqhawula umtshato, kuphela marital ipropati kuya iqwalaselwe kuba ipropati uphinda-phindo kwaye kuphela abo impahla iya uqwalaselwe njengoko marital ipropati ukuba zithe acquired ngexesha yobomi ethile umtshato. Ezinjalo impahla yexabiso zingabandakanya marital ekhaya, ii-akhawunti yebhanki, utyalo mali (kuquka isitokhwe _sinyusiwe, bonds kwaye oyongele umhlalaphantsi) kwaye nkqu amashishini esekwe kulo yobomi umtshato kulo mbuzo. Kwezinye states (Enew York state) apho, zemfundo amaqondo earned ngexesha emtshatweni babe uqwalaselwe marital ipropati. Kwiindawo ezinjalo states, isisombululo wokuqhawula umtshato uya rhoqo entail intlawulo esuka educated mlingane kwezinye mlingane a share zabo kulindeleke elizayo earnings ukuba ingaba ngenxa iqondo baya earned ngexesha wokuqhawula umtshato kwaye ingayalela iinkalo zobuchule ka-sebenza economists okanye ezinye izitatistiki kwaye mali ingcaphephe.
Ferguson, inkundla wachaza indlela enobulungisa unikezelo ka-marital ipropati e wokuqhawula umtshato njengoko fairer, okanye ngendlela elinganayo, kunokuba ezahlukeneyo ipropati indlela. Inkundla ingayalela cinga enjalo imibandela njengoko ‘substantial igalelo accumulation propati, ummandla wentengiso kwaye yeemvakalelo zakho ixabiso impahla yexabiso, irhafu kunye nezinye kwezoqoqosho zoko yonikezelo, amaqela’ ifuna, kwaye nawuphi na omnye umbandela afanelekileyo ukuba i-kwebhodi sikazwelonke.’ Isidima ingaba prevailing guideline inkundla iza kusebenzisa. Alimony intlawulo, umntwana inkxaso izibophelelo kwaye yonke enye ipropati kuya uqwalaselwe. Nkqu non-tangible imirhumo enjalo njengoko a womlingane domestic imirhumo ukuba indlu iya kuthatyathwa ingqalelo, nokuba ukuba ulingane wenze nantoni na enesihloko zabo igama okanye hayi. A mlingane othe wenza non-tangible imirhumo babe ibango i-kwebhodi inzala kwi-marital ipropati e wokuqhawula umtshato. I-Efanayo Umtshato kwaye Umthetho wokuqhawula umtshato § (UMDA §) kanjalo ivumela kuba kwebhodi unikezelo impahla kwaye lidwelisa imibandela inkundla kufuneka iqwalasele, umz. ‘ixesha umtshato, kwaye phambi umtshato ka-noba umntu, antenuptial isivumelwano zamaqela nto efanayo njengoko a prenuptial sivumelwano okanye premarital sivumelwano, ubudala, impilo, station, umsebenzi, isixa-mali kwaye umthombo wengeniso, vocational lwezakhono, employability, ilifa, amatyala, kwaye kufuneka ngamnye zamaqela, custodial izibonelelo.’ njalo-njalo.
Marital misconduct ayiyo ifekta kwi-kwezigqibo nkqubo
Kwebhodi unikezelo ayikho enye njengoko no unikezelo. Umzekelo, phezu ukuchithwa kwezindlu a umtshato apho umfazi njengosihlalo a hlala-e-ekhaya, umama wakhe kuba substantial indawana umtshato, inkundla inakho kweelwimi inkosikazi a ngakumbi-kwama- share ka-zihanjiswe ipropati njengoko ukuqhubela phambili ukuhlawulwa yakhe projected ufuna ukubuyela emsebenzini umkhosi e a thoba aqhuba kunokuba yena ingaba zithe nako umyalelo kokuba yena wachitha wakhe ixesha kodwa ngaphandle ekhaya umsebenzi amava kunokuba laboring ngaphakathi ekhaya
ISEMTHETHWENI INGCEBISO KWI ILIZWE IMIBA